Nepal Tourism muMunich uye FTI Yekufamba mumiririri Kathrin Gatterdam ane rombo rakanaka
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Nepal Tourism muMunich uye FTI Yekufamba mumiririri Kathrin Gatterdam ane rombo rakanaka
Kuputsa Kufamba Nhau • Germany Kuputsa Nhau • Nepal Kuputsa Nhau • nhau • Dhinda Zviziviso • Kufamba Wire Nhau
Uyo anokunda rwendo rwemhuri kuenda kuNepal Kathrin Gatterdam wekambani yeFTI Travel muMunich. NeChishanu mamwe emakambani epamusoro ekufamba muMunich akapinda Kushanya Nepal 2020 kambamambakwedza kuInnside Munich Schwabing hotera kuGerman.
Diwaker Bikram Rana, mukuru mukuru kuNepal Tourism Board pamwe chete nevaviri vevashanyi vakasimbiswa pamusika unotaura chiGerman Mr. Bharat Basnet maneja we Yekuongorora Nepal uye Mr. Pawan SJB Rana weIntertours Nepal yakakurukura sarudzo nyowani mumhando dzakasiyana siyana dzezvivakwa zvekushanya zvinowanikwa kune mushanyi wechiGerman kuNepal.
Munich ndiyo yekumira kwekupedzisira kwemigwagwa mitatu yemuguta yakarongedzwa neETN Corporation, muparidzi weiyi waya.
Chiitiko ichi chakaperekedzwa naMichael Seipelt, mumiriri weETN kuGerman, uye mupepeti mukuru weshanduro yemutauro wechiGerman chebhuku rino. eTurboNews.de
Ruzivo rweKushanya Nepal 2020 kusimudzira enda ku www.nepalvisit2020.com/